Home Wararka Xildhibaano Soomaaliyeed oo haysto dhalashada Ingiriiska oo laga gudbiyay dacwad maxkamadeed
Xildhibaan Cabdi Shire Ciyaar jecel iyo Xildhiban Cabdishakur Cali Mire oo labada haysta dhalashada dalka Ingiriiska aya laga gudbiyay dacwad ka dhan ah iyago lagu eedeeyay in ay hub iyo rasaas u direen Gobolka Galgaduud isla markaana ay ahaayeen maskaxdii ka danbeysay duulaankii ay soo qaadaan maleeshiyo ay isku abtirsadaan.
Jaaliyadda Galmudug ee dalka Ingiriiska aya dacwadaha u gudbiyay wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda amniga (home Office) iyo Booliska dalka Ingiriiska sida uu sheegay Maxamed Xuseen oo ka mid ah jaaliyadda Galmudug ee magaalada London.
Waxaa sidoo kale dacwadda loo gudbiyaya safaaradda Ingiriiska ay ku leedahay dalka Soomaaliya, waxaana dacwadaha ku lifaaqan sawiro dhimashadii xasuuqa ka dhacay gobolka Galgaduud kuwaaso isuga jira dad iyo duunyo.
Labada Xildhibaan oo haysta dhalashada dalka Ingiriiska aya ku muteysan kara dacwaddan xarig iyo ganaax dheer iyo weliba in lagala noqdo dhalashada dalka Ingiriiska. Dalka Ingiriiska ay muwaadiniintooda waxaa ka mamnuuc ah in ay ka qeyb qaataan dagaal isla markaana ay tahay sharci darro in muwaadin Ingiriis ah uu hub iibiyo ama dhoofiya gudaha iyo dibaddaba.
Qareenka ay qabsadeen jaaliyadda aya lagu soo warramaya in uu rajo fiican ka qabo in tallaabo sharci ah laga qaadi doono labada xildhibaan ee ka danbeysay hurinta colaadda ay ku dhinteen shacab badan oo isugu jira carruur iyo haween lagu xasuuqay hubkii ay geeyeen gobolka Galgaduud.